Global Voices teny Malagasy » Japana: Bitsika Vonjy Taitra Ho an’Ireo Ray Aman-dReny Mpialokaloka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Marsa 2011 5:54 GMT 1	 · Mpanoratra Scilla Alecci Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Mpitsoa-ponenana, Voina
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny fandrakofana manokana ataonay momba ny Horohorontany Japana 2011 .
Raha mbola mampanahy mafy ny toe-draharaha ao amin'ilay toby nokleary ao Fukushima Daiichi  [en] ary mampitandry ny amin'ny fisian'ny taratra maheryvaika avy amin'ny iodine sy cesium zava-maniry sy ny rano ny governemanta, mitady toky sy torohevitra avy amin'ireo manampahaizana manokana any anaty aterineto kosa ireo ray aman-dreny manana zaza mbola kely.
Avy amin'i miyakowasureLC. Fampiasàna malalaka.
Indray mandeha indray dia voaporofo fa ny Twitter dia fitaovam-pifandraisana faran'izay tena malaky nampiasaina hanakanana ireo mpampisavorovoro saina sy mpanely vaovao tsy marina.
Mpampiasa iray antsoina hoe panache_chocola no napitandrina mikasika ny fisavorovoroana afafin'ny orinasa sasany mampiasa teny tsy voalanjalanja anatin'ireo hafatra ara-barotra alefany.
@panache_chocola  Mitondra fikorontanana ny filazan'ny orinasa mpanodina ronono hoe ‘aza mampiasa rano mineraly’. Sahala amin'ny miteny hoe aza mampiasa rano mahery? Manjary mahazo hevi-diso ny olona. Tsy maninona mihitsy raha mbola ambanin'ny 120 ny PH-n'ny rano. Ny ankamaroan'ireo rano vokarina dia tokony ho OK daholo. Toa tetikadin'ireo orinasa mpamokatra vovo-dronono no fahitako azy io http://bit.ly/hxW2Na
Mba hifehezana ny tahotra an'ilay taratra, ireo manampahaizana manokana toy ny avy amin'ny ekipan'ny radiotherapy ao amin'ny Hopoitalin'ny Anjerimanontolon'i Tokyo dia namorona kaonty Twitter mba ho fanomezam-baovao tsy tapaka ny mpamaky mikasika ny vokatry ny sakafo voapoizin'ny taratra.
team_nakagawa  Ny torohevitra nomen'ny Kaomisiona Iraisampirenena momba ny Fiarovana amin'ny Taratra dia mifototra indrindra amin'ny fandalovana fotoana fohy tamin'ilay taratra ampiasaina amin'ny scanner toy ny CT / IRM (Avy amin'ny mpandika: sehatry ny fitsaboana). Raha sendra tratry ny taratra avy aminà toby nokleary nandritry ny fotoana maharitra, dia fantatra fa tsy dia goavana manao ahoana ny fiantraikany satria manavao tena ny ADN avy eo.
team_nakagawa  Noho izany, tsy misy tokony hampanahy ny mikasika izay ho vokany amin'ny zaza am-bohoka ivelan'ireo faritra tsy maintsy nialàna na ireo nodidiana tsy hivoaka ny faritra misy azy. Na izany aza araka izay efa fantatrareo rahateo, tsy misy ny risika Aotra ho an'ny tsy fetezana na homamiadana mety hahazo ny zaza menavava avy amin'ny taratra entin'ny singa natoraly manodidina (na tsy nisy loza nokleary aza, miantefa amintsika ny taratra avy any an-habakabaka, ny tany ary ny sakafo.)
team_nakagawa  Nahita fampahafantarana mikasika ny fomba atao handrefesana ny taratra ao anatin'ny epinard izahay izay tiako hifampizaràna aminareo: ny vokatra avy amin'ny fandrefesana ny haavon'ny taratra tao anaty epinard dia azo avy amin'ireo anana nosasàna tamin'ny rano.
Ao amin'ny bilaoginy, i profesora Takeda mampianatra ho injeniera ao amin'ny Anjerimanontolon'i Chubu dia manazava  hoe nahoana nyo tsy miantraika amin'ireo zazakely ny iodine 131 sy ny cesium 137 rehefa tsy misotro zavatra misy azy ireo ny ankizy.
Ny rano alaina amin'ny paompy hampandroana azy no mety hitondra taratra ho an'ny zazakely, saingy ny hoditry ny olombelona dia manana fahafahana manohitra ilay taratra ihany amin'ny lafiny sasany. Mampitombo avo 10 heny ny mety ho fahavoazana ny fisotraoana ilay rano.
Raha fanazavana lavabe 140 no torohevitra omen'ireo manampahaizana, ireo reny sy raim-pianakaviana any amin'ireo faritra voadona kosa miantehitra amin'ilay vorona manga (Twitter) mba hifampizarany ny fomba atao ampiharina any amin'ireo toby fialofana, amin'ny fampiasana ny tenifototra #babyhinan (na #babyrefugee).
Usako818, ohatra, dia manazava ny fomba tsotra ikarakarana sakafon-jaza avy aminà taharo vitsy monja.
usako818 Amin'ny fampiasàna kaopy vita amin'ny baoritra sy sotrokely plastika (izay azon'ny rehetra jerena eny amin'ny toeram-pivarotana), azonao atao ny manapotsitra vary na kobam-bary manitra mba hanaovana sakafo tonga dia vonona ho an'ireo zazakely! Tena tsy ampy isa ireo kaopy kely tsotra any amin'ireo. Miangavy mba ampio ho fanavotana ireo zazakely!! #babyrefugee
While a mother links to a trustworthy source where breastfeeding in times of disaster is explained in details… Reny iray no manome rohy mankany amina loharano iray azo antoka izay anazavana amin'ny antipirihany ny fomba fampinonoana rehefa fotoanan'ny loza goavana toy izao…
nyamisuke Ny zavatra tokony hosorohana rehefa mampiasa ronono avy aminà reny hafa mba hamahanana zaza iray dia nazavaina tamin'ny antipirihany mihitsy eto #babyrefugee ‘Mamahana ronono avy aminà reny hafa mandritra ny fotoanan'ny lozabe’ 
… iray hafa no manazava ny fomba fanamboarana tatin-jaza rehefa tratry ny nakamehana.
bachiriko Tàtin-jaza anaty fotoanan'ny ankamehana: 1. soloy tàty fanaon'ny vehivavy rehefa tonga fotoana na ho an'ireo tsy mahatàna amany 2. manaova lamba famaohana atao anaty harona plastika ka tazony amin'ny scotch. Fomba iray hafa ny famehezana ny elakelam-peny amin'ny lamba famaohana ka tazonina tsara amin-javatra, ary avy eo tazonina scotch na fonosina harona plastika. Raha mbola misy ambiny iray aza ny tàty, ampiasao iny fa asio lamba famaohana ao anatiny. (zava-niainan'ny niharam-boina iray) #babyrefugee
Farany, i babytweets dia manampy amin'ny fanelezana ireo hafatra mitondra fanantenana ho an'ireo ray aman-dreny afaka miserasera.
YourBabyJP_bot  Ekena ry Neny, izao an, izao an, aza manahy. Efa ao tsara ve izao? Na tsy misy jiro aza ary mihetsika ny tany, tsy hatahotra aho raha mbola i Neny no OK. Aoka isika hahery!
YourBabyJP_bot Na ireo zaza tsy nanao afa-tsy ny nitomany aza tany amboalohany dia hitombo ho afaka hiazakazaka sy hitsambikimbikina etsy sy eroa, noho izany i Neny jerena, azo antoka ny hitomboan'i Japana manaraka izany fomba izany.
Fisaorana betska no atolotra an'i Rino Yamamoto tamin'ny nandikany ireo bitsika rehetra ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/03/29/15582/
 ny toe-draharaha ao amin'ilay toby nokleary ao Fukushima Daiichi : http://www.iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate01.html
 i profesora Takeda mampianatra ho injeniera ao amin'ny Anjerimanontolon'i Chubu dia manazava: http://takedanet.com/2011/03/26_cb62.html